प्रहरी – नेपाल रफ्तार
प्रहरीमा बढ्दाे निराशा, प्रत्येक दिन ७ प्रहरीले छाड्छन् जागिर !
काठमाडौं : मुलुकको प्रमुख सुरक्षा संगठनमध्येको एक नेपाल प्रहरीमा दैनिक सातजनाले जागिर छाड्ने गरेको पाइएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयकै पछिल्लो तीन वर्षको तथ्याङ्‍कअनुसार दैनिक ७ जनाले औसतमा जागिर छाड्ने गरेको पाइएको हो । जागिर छाड्नेमा हवल्दार र असईको संख्या सबैभन्दा बढी छ । सरकारी सेवामा प्रहरीमा जागिर छाड्नेको संख्या अन्य निकायभन्दा बढी छ । बढ्दो निराशा, समयानुकूल सेवा सुविधा, उत्तम अवसरका लागि जागिर छाड्ने क्रम बढेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा...
बागमती प्रदेशका एसपीसहित ९० प्रहरीलाई कोरोना
काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)सहित ९० जनालाई कोरोना संक्रमण भएको छ । मंगलबार साँझसम्म ९० जना पुगेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय, हेटौँडाले जानकारी दिएको छ । मकवानपुरमा कार्यरत प्रहरीलाई प्रदेशभरि सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको कार्यालयले जनाएको छ । मकवानपुरमा हालसम्म ४९ जना प्रहरीलाई संक्रमण पुष्टि भएको छ । प्रहरी उपरीक्षकदेखि इन्स्पेक्टर, प्रहरी सहायक निरीक्षक ७ जना, प्रहरी हवल्दार २२ जना, प्रहरी जवान ५४ जनामा कोरोना देखिएको छ । २ ज...
प्रहरीका ७२ डीएसपीहरूको सरुवा, कसकाे सरुवा कहाँ ?
काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले ७२ जना प्रहरी नायब उपरीक्षकहरू (डीएसपी)को सरुवा गरेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक सैलेश थापा क्षेत्रीको भदौ १५ गतेको निर्णयअनुसार डीएसपीहरूको सरुवा गरिएको सूचनामा उल्लेख छ । सरुवा हुनेमा डीएसपी अनुपम श्रेष्ठ, अञ्जान श्रेष्ठ, अपीलराज बोहरा, अर्जुन केसीलगायत रहेका छन् ।
प्रहरीलाई नेलम्बोको सहयोग
हेमजा : नेलम्बो नेपालले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई आइतवार स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री प्रदान गरेको छ। संस्थाले परियोजनाको तेस्रो चरणअन्तर्गत त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा पूर्ण सावधानी अपनाउन सामग्री प्रदान गरेको हो । सर्वसाधारणको सेवामा खटिने सुरक्षाकर्मीहरु संक्रमणको उच्च जोखिममा रहने भएकाले सुरक्षित रहेर कार्य गर्न सहज होस् भन्ने हेतुले सहयोग गरिएको हो। संस्थाले ग्लोब्स, मास्क, सेनिटाइजर, फेस सिल्ड, हेड कभर र केएन–९५ मास्क गरी कुल १ लाख २ हजार ४ सय १...
बाँकेमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने प्रहरी सन्तोष र देवेन्द्र पुरस्कृत
बाँके : जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले दुई जना प्रहरी जवानलाई महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी पुरस्कृत गरेको छ । प्रहरी कार्यालय परिसरमा आज आयोजित एक समारोहका विच बाँके प्रहरी प्रमुख एसपी ओम रानाले २०७७ साल साउन महिनाको उत्कृष्ट प्रहरीको रुपमा प्रहरी जवानहरु सन्तोष पौडेल र देवेन्द्र हमाललाई नगद कदरपत्रसहित पुरस्कृत गरेका हुन् । प्रहरी विभागीय मूल्य मान्यता, आदेश निर्देशनको अक्षरस पालना गरी व्यवसायिक, लगनशिल, ईमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ तवरले कर्तव्यपालनामा तल्लिन रहि उच्च मनोवलका साथ ...